महतको बजेट र पाँचकरोड प्रकरण – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
महतको बजेट र पाँचकरोड प्रकरण
२०७१ श्रावण १२, सोमबार ०४:०० गते
कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले असार २९ गते ०७१।०७२ को संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट एउटा रुटिन बजेट हो । यो परम्पराअनुसार असारको अन्तिम साता प्रस्तुत हुँदै आएको छ । महतको बजेट प्रस्तुत भएपछि चारैतिर विभिन्न कोणबाट आलोचनाका स्वरहरु बाहिर आएका छन् । नेपाल राजतन्त्रको अन्त्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ । देश संघीयतामा गइसकेको छ, तर महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले संघीयताको विषयमा सम्बोधन नहुँदा बढी आलोचना हुने गरेको छ । यो बजेट प्रतिफल प्राप्त नहुने देखिएको छ । कनिका छरेझैँ धेरैतिर रकम छरिएपछि अनुगमनमा समस्या देखिन सक्छ । महतले प्रस्तुत गरेको बजेट सहरिया मध्यम वर्गको मन जित्न आयकरको सीमामा छुट दिएका छन् । बजेटले उच्च आर्थिक वृद्धिको विषय ओझेलमा पर्नुका साथै धेरैतिर रकम छरिएपछि चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । अर्को मुख्य कुरा नीतिगत सुधार र ठूला जलविद्युत र उद्योगमा कर छुट दिने तथा लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिएको छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन ल्याउने कम्पनी ऐनमा परिवर्तन गरी फर्मबन्द गर्न सजिलो बनाउने र श्रम ऐनमा लचिलो हुने विषय कार्यान्वयनको लागि ठूलो जटिलता थपिने छ । बजेटले जनतालाई विगतमा भन्दा फरक अनुभूति दिलाउने सम्भावना देखिँदैन । जुन प्रकारले कायक्रम तर्जुमा र बजेटको बाँडफाँड गरियो, न्यून आय भएका जनता, बेरोजगार साना उद्यमी, किराना पसल राख्ने व्यापारी आदि कसैलाई पनि यस बजेटले प्रभाव महसुस गर्न सक्ने देखिँदैन । ठूला लगानीकर्ताले आम्दानी कर छूट पाएका छन् भने दैनिक ज्यालादारी गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने श्रमिकहरु र यी जस्ता लाखौँ नेपाली जनताले के पाए ? यस बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न सकेन । महत खुलाबजार अर्थतन्त्रका पक्षमा देखिन्छन् । घरमा विनाकाम बस्ने, सडकमा डुल्ने शिक्षित बेरोजगार युवालाई यो बजेटले सम्बोधन गरेन । महतको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने र नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा विकासोन्मुख देश बनाउने जुन कुरा छ, त्यो सकारात्मक देखिए पनि शंकोको घेरामा पर्ने देखिन्छ । यो बजेटले आम नेपाली जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले धेरै कोणबाट आलोचना खेप्नु परेको हो ।
महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले जनताको आकांक्षा पूरा नहुने हुँदा जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने उखान जस्तै पुरानैकै निरन्तरतामा आएको छ । यसले देशको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन । किनभने खर्चहरुको अनुपात हेर्दा ६४ प्रतिशत साधारण खर्च छ यो अनुत्पादक हो । विकास खर्चमा १८ प्रतिशत छ । त्यस्तै १६ प्रतिशत विदेशी ऋण तिर्न खर्च हुने छ भने के यस्तो बजेटले नेपालको विकास हुन सक्छ ? थोरै विकास खर्च छुट्याएर देशको विकास गर्न सकिँदैन । देश विकासको लागि नयाँपन आउनु आवश्यक थियो । राजश्वमा पनि नयाँपन आउन सकेन । वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण उठाएर गरिने खर्चले नेपालको कहिल्यै विकास हुन सक्दैन । शब्दले विकाशशील मुलुकमा जान प्रतिवर्ष ८ प्रतिशत वृद्धिदरको कुरा गरिएको भए पनि त्यसको निमित्त ठोस खाका देखिएन । अर्को मुख्य मुद्दा कृषि र युवाहरुको लागि कुनै खास कार्यक्रम आउन सकेन । आएपनि सम्बोधन गर्ने खालको देखिदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी बनाएर नयाँ कार्यक्रम आउन जरुरी थियो, आएन । धेरै शिक्षित युवाहरु वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिएका छन् । उनीहरुलाई सीप सिकाउन प्राथमिकता दिनु अति आवश्यक थियो, तर बजेटले यस सम्बन्धमा खास चासो नेदिएको बुझिन्छ । अर्को मुख्य कुरा आमनेपाली जनताको मुख्य समस्यामा रहेको मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी समस्या र व्यापार घाटाबारे बजेटले केही समबोधन गरेन । महतले बजेट प्रस्तुत गरियो भनेता पनि सबैभन्दा ठूलो कुरा बजेट कार्यान्वयनको पाटो हो । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नबढाउने हो भने बजेट जति आए पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसक्दा पनि बेरोजगारीको समस्या झन् चर्किँदै गएको छ । बेरोजगारी समाधान गर्न बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विगतका सरकारले गरेका झिनामसिना स्वरोजगारका कार्यक्रमहरुलाई तिरस्कार गरिएको छ । भएका सांगठनिक सार्वजनिक संरचनालाई भत्काएर सबै बजारलाई सुम्पने र हुने खाने ठूला बडाको अधिनमा सबै कुरा लैजाने नवउदारवादी पूँजीवादको लक्ष्य हुने हुँदा महत बजारवादी नै थिए छन् । बजेटले युद्ध र जनआन्दोलनको विषयलाई छोएको देखिँदैन । बजेटले जनतामाथि थप कर बोझको संकेत देखिनुका साथै त्यसको नसोचिएका परिणाम पनि ल्याउन सक्नेछ । यसै कारणले चारैतिरबाट आलोचनाको स्वरहरु घन्किएका छन् । बजेटले समग्र देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको आधार खडा भएको देखिँदैन । अर्को कुरा नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको कृषि अर्थतन्त्र मनसुनी वर्षामा आधारित भएकोले यसमा हरितक्रान्तिबाट आधुनिक कृषि अर्थतन्त्रमा विकसित गर्नुपर्ने चुनौति छ भने अर्कोतिर यसका लागि नयाँ र ठूलो सिंचाइ आयोजनाहरुको अभावमा बजेटले अपेक्षा गरेको कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण सम्भावना देखिँदैन । बजेटले सामाजिक समावेशीकरणको नीति र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकने । यो बजेट असमावेशि बजेटका रुपमा चित्रण गरिएको छ । जस्तै पछाडि परेका जिल्लाहरुका जातजातिहरु दलित डुम, तराई मधेशी दलित मुस्लिम चेपाङ र अन्य पिछडिएका जातजातिलाई बजेटका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, गरिएन । अर्को सबभन्दा कम साक्षर भएका जिल्लाहरुमा बजेटले विशेष रुपले अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट साक्षरता कार्यक्रमको विशेष प्याकेज ल्याउन जरुरी थियो, तर विडम्वना यो बजेटले कुनै सरोकार नै राखेन । आर्थिक वर्ष ७१।७२ को बजेट सार्वजनिक भएपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भए, गरिए । २००८ सालदेखि हालसम्म ६० भन्दा बढी बजेटहरु वार्षिक कार्यक्रमको रुपमा आइसके, तर अझसम्म नेपालको विकास हुन सकेको छैन ।
अर्को कुरा सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार गर्ने नाममा झिनामसिना नारा भएता पनि महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले खास नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । समृद्ध नेपालका लागि मेलखाने योजना कार्यान्वयनका लागि ठोस पहल र आवशयक क्षेत्रमा आमूल संरचनागत परिवर्तन गर्न यसै बजेटबाट पहल गर्न सकिन्थ्यो, तर महतको ध्यान पुग्न सकेन । बजेट कर्मकाण्डी मात्र हुन गयो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै केही सांसदहरुले आफ्नो संसदीय क्षेत्र विकास कोषको नाममा हिजो दिइ आएको १० लाख रुपैयाले विकास गर्न अपुग हुने भएकोले ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्छ भनी हस्ताक्षर अभियान नै चलाएर माग गरेका थिए । महतले सांसदहरुलाई खुसी बनाउन केही सांसदहरुलाई फर्जी बिल बनाउन १० लाख नै भारी भएको अवस्थामा १ करोड ५ लाख थपिदिएपछि के
होला ? सांसदहरुले आफ्नो तजविजमा खर्च गर्न पाउने उद्देश्यले मागिएको ५ करोड रुपैयाँ आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणको कामलाई गति दिने उद्देश्यले भन्दा त्यो रकमबाट आप्नो राजनीतिक बर्चश्व र आफ्ना कार्यकर्ता तथा आसेपासे पोस्ने दुरासयका कारण मागिएको हुन सक्छ । यो ५ करोड प्रकरण झन् आपत्तिजनक देखिन्छ । जनही दिई आएको १० लाख रुपैया सांसद विकास कोषको रकमलाई सासंदहरुले अपारदर्शी रुपमा कनिका छरेझैँ खुद्रे कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको आफ्ना निकट कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी दिई योजना बाँडफाँड गर्ने गरेको र अधिकांश योजना आफूनिकट दलका कार्यकर्ता अगुवा भएको संस्था वा व्यक्तिले मात्र पाउने गरेको कार्यविधिमा व्यवस्था नै नभएको योजनाका लागि रकम दिने गरेको यस्ता धेरै कमजोरी हुँदा हुँदै पनि ५ करोड उपलब्ध गराउनुपर्छ भनी हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाउने सांसदहरुको नियत सकारात्मक सोचबाट गरेको देखिँदैन । यदि ५ करोड रुपैया सांसदहरुलाई उपलब्ध गराएको हो भने यस कार्यक्रमले राजनीतिमा नकारात्मक सन्देश भित्रिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । सांसदहरुले ५ करोड मागेको विकास गर्न नभएर गएको निर्वाचनको खर्च गरेको करोडौँ रुपैया उठाउनै प¥यो । निर्वाचनमा लागेको ऋण तिनै प¥यो । यदि ती सांसदहरु संघीयताका पक्षधर हुन् भने माघ भित्र संविधान निर्माण गरेर अर्को असारभित्र संघीय प्रदेशको निर्वाचन गर्नको लागि यो बजेट माग्नु उचित देखिन्थ्यो । सांसद विकास कोषको निजी तजबिजमा खर्च गर्न पाउने गरी रु. ५ करोड माग्नु त सोझै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्नुबाहेक अर्को देखिँदैन । साहुहरुले निर्वाचनमा लगाएको गुनको भारा तिर्ने उद्देश्य भएको प्रष्टै देखियो ।